BETAFO - ANTSIRABE : Lehilahy iray avy nanara-dia matin’ny lozam-pifamoivoizana
Tovolahy iray avy nanara-dia omby, nangalarin’ny dahalo, no maty navadiky ny fiara nitondra azy ireo ny marainan’ny alatsinainy lasa teo iny. 16 juin 2017
Nahomby soa aman-tsara ny fanarahan-dia nataon’izy ireo saingy tra-doza tampoka rehefa teny an-dalana hitodi-doha niverina any an-tanàna. Sahabo ho 15km tsy hidirana ny tanànan’i Betafo no nisehoan’ilay lozam-pifamoivoizana.
Nitrangana fanafihan-dahalo tao anatin’ny Fokontany Antanambao, Distrikan’i Betafo. Nanao andiany maro ireo mpanafika tamin’izany sady niaraka tamin’ny basy sy fitaovam-piadiana maro isan-karazany.
Noho ny hamaroan’isan’izy ireo sy ny famonoana lolo tamin’ny alalan’ny poa-basy variraraka tao an-tanàna dia tsy nisy sahy nivoaka ny trano ny olona. Valan’omby ana tokantrano telo teo an-tanàna no voaroba izay nahaverezana omby 15 isa.
Tsy nisy kosa anefa ny aina nafoy na ny naratra fa rehefa nahazo izay nilainy ireo olon-dratsy dia lasa nitsoaka. Dify ny tanàna ireo malaso vao raikitra ny hazolava ka vatan-dehilahy maherin’ny folo no nanolo-tena hanampy isa ireo mpitandro filaminana hanao ny fanarahan-dia.
Raikitra ny fifanjevoana rehefa nifankahatratra ny roa tonta, raraka teo am-pelantanan’ireo dahalo avokoa ny omby rehetra. Handeha hiverina hody any an-tanàna amin’izay ny fiara nitondra ireo mpanara-dia no nivadika tampoka. Goavana ny fahavoazana tamin’izany, maro tamin’ireo vatan-dehilahy tao anaty fiara no naratra ary iray tamin’izy ireo kosa no fantatra fa tena voa mafy.
Na dia natao aza ny fialana nenina tamin’ity farany dia tsy tana intsony ny ainy noho ny ratra goavana nahazo azy.